သင့် Google အကောင့်ကို Password မထည့်ဘဲနဲ့ ဘယ်လို Sign In ၀င်မလဲ ? - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းလမ်းများ > သင့် Google အကောင့်ကို Password မထည့်ဘဲနဲ့ ဘယ်လို Sign In ၀င်မလဲ ?
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 9:04 PM Tutorial, နည်းလမ်းများ
Google က သင့်အကောင့်များကို Sign In ၀င်တဲ့အခါမှာ Password များ ရိုက်ထည့်ရတဲ့ အလုပ်ရှုပ်မှုကို သက်သာစေဖို့ စွမ်းဆောင်ချက် အသစ်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Password များ မလိုဘဲ သင့်ဖုန်းနဲ့ Sign In လုပ်နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့် ပီစီ သို့မဟုတ် အများသုံး ပီစီ သို့မဟုတ် Device တစ်ခုခုကနေ သင့် Google အကောင့်များကို Sign In ၀င်တဲ့အခါမှာ Password များ ရိုက်ထည့်စရာ မလိုတော့ဘဲ သင့်ဖုန်း သင့်လက်ထဲမှာ ရှိနေတာနဲ့ Sign In ၀င်နိုင်ပါတယ်။
သင့် ဖုန်းပျောက်နေရင် သို့မဟုတ် လက်ထဲမှာ မရှိရင်
သင့် ဖုန်းပျောက်နေရင် သို့မဟုတ် လက်ထဲမှာ မရှိရင် Sign In Screen မှာ “ Try another way to sign in “ Link ကို နှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် Password နဲ့ Sign In ၀င်နိုင်ပါတယ်။ သင့် ဖုန်းပျောက်နေတာ ဆိုရင်တော့ Sign In ၀င်ပြီးတဲ့အခါမှာ Sign In Settings ထဲသွားပြီး “ Sign In with your phone “ Settings မှာ သင့်ဖုန်းကို Delete လုပ်ပါ။
သင့် Google အကောင့်ကို Password မထည့်ဘဲနဲ့ ဘယ်လို Sign In ၀င်မလဲ ? Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 9:04 PM Rating:5Google က သင့်အကောင့်များကို Sign In ၀င်တဲ့အခါမှာ Password များ ရိုက်ထည့်ရတဲ့ အလုပ်ရှုပ်မှုကို သက်သာစေဖို့ စွမ်းဆောင်ချက် အသစ်တစ်ခုကို ထည်...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 9:04 PM